က်န္းမာေရးသုတ Archives - Latest Myanmar News
အဆိပ် အားလုံးရဲ့ဖြေဆေးမြွေဆိပ်နိုင်တဲ့ ဟင်းငုတ်ပင်(ခ)သခွပ်ပွင့်ယောအခေါ် ဟင်းခတ်ပွင့် ဟင်းငုတ်ပင်(ခ)သခွပ်ပင်ကိုဒေသအလိုက်ဟင်းဂုတ်ပင် ဟင်းခတ်ပင်ဟု ခေါ်ကြပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးပေါက်သည်။ နှစ်ရှည်ပင်ကြီး။ပင်စည်တွင် အခေါက် အပွေးမရှိ။ အရွက်အနည်းငယ်ဝိုင်း။အပွင့်အဖြူရောင်။ပဒိုင်းပွင့်နှင့်တူပါသည်။ တန်ခူးမှဝါဆိုလအထိပွင့်သည်။အသီးမှာသေးသေးရှည်ရှည်။နှစ်ပေခန့်ရှိ။ ဆေးဘက်ဝင်ဝင်ပုံများ အခေါက် ၁။ မြွေပွေး။မြွေဟောက်ကိုက်ခံရပါက အခေါက်ကိုအမြန်ဝါးစားလိုက်ပါလျှင် အဆိပ်မရှိတော့ပါ။ငန်းတော်ကျား။ငန်း မြွေ အပါအဝင်ပါ။ (မြွေပွေးနှင်မြွေဟောက်သာအကိုက်ခံသူရှိ၍ဦးစားပေးဖေါ်ပြရခြင်းပါ) ၂။ အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါလေးများကိုက်လျှင်လည်းအခေါက်ဝါးးစားပါ။ ၃။ မျက်စေ့နာပါကအခေါက်သွေးပြီးမျက်လုံးကွင်းလိမ်းပါ။မကျည်းခေါက်လိုအပွေးမရှိ။ ၄။ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲပါက အခေါက် ပြုတ်ရေ ချိုးပါ။ အပွင့် ၁။ ရှေးကတည်းကကလေးတွေကိုရောဂါကင်း။ကိုယ်တွင်းအဆိပ်ကင်းသည်ဆိုကာသုပ်ကျွေးကြသည် ၂။ အပွင့်ကိုရေနွေးဖျောရုံဖြင့်ကျက်သည်။အခြောက်ဆိုရင်ပြုတ်ရသည်။အခြောက် အရောင်မဲနေသည်မှလွဲ၍အရသာမပြောင်းပါ။ ၃။ ဘီပိုး။စီပိုး ပျောက်သည်ဆိုကာတော်တော်များများအပွင့်သုပ်စားနေကြသည်။ ၄။ ဈေးတွင်ဟင်းရွက်တန်း၌ရောင်းချနေကြပါသည်။တို့စားစရာအ ဖြစ်လည်းသုံးသည်။ အရွက် ၁။ အရွက်နုကိုဟင်းခါးချက်သောက် ကြသည်။ ၂။ ကလေးများရေကျောက်ပေါက်လျှင် အရွက်ပြုတ်တိုက်သည်။ ၃။ တကိုယ်လုံးညောင်းညာကိုက်ခဲလျှင်၄င်း။ကလေးများကျန်းမာရေးအတွက်၄င်း။အရွက်ပြုတ်ရေ ဖြင့်ရေချိုးကြသည်။ ၄။ … Read more
ဆီးကြိတ်အတွက် ကြခတ်ဝါးရွက် ဆေးနည်းလေး
August 25, 2021 by Latest Myanmar News
ကြခတ်ဝါးရွက်နဲ့ ဆီးကြိတ်ရောဂါ ဆေးနည်းလေး အမျိုးသားများ အသက် ၅၀ ကျော်လျှင် သတိထားရမည့် ရောဂါမှာ ဆီးကြိတ်ဖြစ်ခြင်းပါ။ သတိထားရမည့် ဆီးကျိတ် လက္ခဏာများမှာ… ဆီးကျိတ် စဖြစ်လျှင် ဆီးအောင့်မထားနိုင်ပါ။ ဆီးအမြန်သွားရသည်။ ဆီးကျိတ် ကြီးလာလျှင် ဆီးအောင့်ခြင်း မလုပ်နိုင် ဆီးများ ထွက်ကျတော့သည်။ ရောဂါပြင်းလာသည့်အခါ ဆီးအ​ရောင် ဆီးအနံ့မကောင်း ဆီးတွင် အနည်အနှစ်များ ဖြစ်လာသည်။ထိုသို့အခြေအနေဆိုးဖြစ်လျှင် ခွဲစိတ်ကုသကြရသည်။ ငွေမကုန်ပဲ ကြခတ်ဝါးရွက်ဆေးနည်း ဆီးကြိတ်ရောဂါကို ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ ကုသခြင်းအတွက် အသုံးပြု၍ရသည်။ လိုအပ်သည်များ – ကြခတ်ဝါး လက်တဆုပ် ၊ ဒိုဘာလာ သကြားခဲေ ၊ရနွေး တအိုး ကြခတ်ဝါး လက်တဆုပ်ကို ရေဆေးထည့်ပြီး ဒိုဘာလာသကြားခဲ ၂ ခဲ ရောထည့် ကျိုပေးပါ ။ ပွက်ပွက်ဆူအောင် … Read more
ပင်စိမ်းပင် စိုက်ပျိုးထားသင့် အကြောင်း ရင်း
ပင်စိမ်းပင်ကို ဘာ့ကြောင့် အိမ်တိုင်းမှာ စိုက်ပျိုးထားသင့်တာလဲ။ ဘယ်လိုစိုက်ပျိုးရမလဲ။ ပင်စိမ်းပင် အိမ််မှာ စိုက်ပျိုးသင့်သော အကြောင်းရင်း 1. ပင်စိမ်း အရွက်ကို နေတိုင်း စားပေးခြင်း အားဖြင့် အူလမ်းကြောင်း ဝမ်းဗိုက်နှင့် ပါးစပ်တွင်ဖြစ် တက်သောရောဂါများ ကင်းဝေးပီး အစာခြေ စနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါသည် ။ 2. ပင်စိမ်း အရွက်ကို ရေထဲတွင်စိမ်ပြီး နေတိုင်း သောက်လာပါက ဆီးချိုရောဂါ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါသည်။ 3. ပင်စိိမ်း အရွက်ကို ပထမရက် ရေချိုးမည့်ရေတွင် စိမ်ထားပြီး နောက်နေ့ ရေချိုးပါက ချွေးအနံ့ မထွက်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ 4. ပင်းစိမ်း အရွက်ကို သံပုရာရည် ရော၍ ကျိတ်ပြီး အရေပြားပေါ်တွင် လိမ်းပေးပါက အရေပြား ရောဂါများဖြစ်သော ဝဲ နှင်းခူ … Read more
မီးဖိုချောင်က သွေးကျဲဆေးနည်း မန်ကျီးသီး မုန့်လုပ်ထန်းညှက်အမဲ ဆားအနည်းငယ် (ချဉ်ချို အရသာရှိပါတယ် ) ဝမ်းချုပ်နေသူများ အတွက် သင့်တော်ပြီး ဓာတ်သက်ပြီး သွေးကျဲစေတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးနည်းပါ (ကိုဗစ်လူနာများ ဝမ်းချုပ်နေလျှင်လည်း သင့်တော်ပါတယ် ) အနာကိုသိ ဆေးကိုညှိနိုင်ကြပါစေ ဆရာကြီး ဦးရန်အောင်နှင့်တကွ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာများအား ဦးညွတ်လျက် ဟန်မိုး (မအူပင်) Zawgyi မီးဖိုေခ်ာင္က ေသြးက်ဲေဆးနည္း မန္က်ီးသီး မုန္႔လုပ္ထန္းညွက္အမဲ ဆားအနည္းငယ္ (ခ်ဥ္ခ်ိဳ အရသာရွိပါတယ္ ) ဝမ္းခ်ဳပ္ေနသူမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္ျပီး ဓာတ္သက္ျပီး ေသြးက်ဲေစတဲ့ တိုင္းရင္းေဆးနည္းပါ (ကိုဗစ္လူနာမ်ား ဝမ္းခ်ဳပ္ေနလွ်င္လည္း သင့္ေတာ္ပါတယ္ ) အနာကိုသိ ေဆးကိုညွိနိုင္ၾကပါေစ ဆရာၾကီး ဦးရန္ေအာင္နွင့္တကြ သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာမ်ားအား ဦးညြတ္လ်က္ … Read more
သံပုရာသီး က ဘာတွေကောင်းသလဲ
August 12, 2021 by Latest Myanmar News
သံပုရာသီး အစွမ်း မိုးရာသီသည် သံပုရာသီးပေါသည့်ကာလဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သံပုရာသီးနင့်တိုင်းရင်းဆေးအကြောင်း အနည်းငယ်တင်ပြလိုသည်။ ၁) – သံပုရာသီးအစေ့ကို သင့်လျော်အောင်ထောင်း၍ခေါင်းကိုက်ရာအုံပြီးစောင်ခြုံအိပ်ရင် သက်သာလာစေပါမည်။ ၂) – ဆံပင်ပြောင်နေပါက အစေ့ကိုသွေးလိမ်းပါ ၃ ) – အဆိပ်မိပါက သံပုရာသီးအစေ့ ၇ စေ့စားပါ ၄ ) – သံပုရာရွက်ကိုကျိုသောက်က အဖျားရောဂါပျောက်စေသည်။ ၅ ) – သွားကိုက်ပါက အရွက်ကိုကျို ငုံသောက်ပါ။ ၆ ) – သံစူးပါက အရွက်ညှစ်အရည်နင့်လိမ်းသိပ့်ပေးပါ ။ ၇ ) – အကြောအဆစ် အကိုက်အခဲရှိပါက အမြစ်ပြုတ်ရည်သောက်ပေးပါ ။ ၈ ) – သံပုရာခေါက်ကို ကျိုသောက်ပါက ဝလာလိမ့်မည်။ ၉ ) … Read more
ရာသီချောင်းဆိုးရောဂါ အတွက် ဆေးနည်းလေး
August 9, 2021 by Latest Myanmar News
ရာသီချောင်းဆိုးရောဂါ အတွက် ချောင်းဆိုးရောဂါ မဖြစ်ဖူးသူရှိမည်မထင် အလွန်ခံရခက်သည် အိပ်ရေးပျက်တတ်သည် အားအင်ယုတ်လျော့လာတတ်သည် ရောဂါကုသရန်ဆေးမှာ တိုင်းရင်းဆေး အနောက်တိုင်းဆေးများစွာရှိပါသည် အထက်ပါဖော်ပြသောေ ဆးတို့ဖြင့်မပျောက်နိုင်သော ချောင်းဆိုးရောဂါကတော့ ရာသီချောင်းပါ ယခုကာလ တုပ်ကွေးရာသီဖျားနာပြီး အဖျားရောဂါပျောက်သွားပေမဲ့ေ ချာင်းဆိုးရောဂါက မပြန်ပဲ ခန္ဓာအိမ်ကို ဧည့်ကျယ်လုပ်နေတတ်ပါသည်၎င်းကိုကုသဆေးညွှန်းလိုပါသည် သင်းဘောသီး အစိမ်းတစ်လုံးကို ထိပ်မှလှီးဖွင့်ပြီးအစေ့များဖယ်ပစ်ကာ ဆားအပြည့်သိပ်ရပါမည် ထိပ်ကို သွားကြားထိုးတန် ဖြင့်ထိုးစိုက်ကာ လှီးဖွင့်ထားသောအစိပ်ပိုင်းကို လုံအောင်ပြန်ပိတ် မီးဖုတ်ရပါမည် အခွံကျွမ်းသည်အထိဖုတ်ပါ ကျွမ်းသွားရင် ဘေးအခွံကျွမ်းများကိုဖယ်၍ ဆားကို ယူကာ လေလုံသောပုလင်းထဲထည့်ထားပေး ၎င်းဆားမီးဖုတ် မန်ကျီး၁စေ့ခန့်ေ ရှာက်ရည် ၊ပျားရည်တို့ဖြင့်ဖျော်စပ်၍သောက်သုံးရပါမည် ၎င်းနောက်ရေနွေးပူပူဆက်သောက်ရန်လိုပါသည် ဖျော်ထားပြီး မကြာခဏလျက်ပေးလဲရပါသည်ေ ချာင်းဆိုးခြင်းကြောင့် အိပ်မရသောအခါချင်းခြောက် ၂ဖတ်ခန့် ပါးစောင်နှစ်ဖက်မှာ ကွမ်းငုံသလိုငုံအိပ်ပါ ပုံသည် သင်္ဘောသီးဆားထည့်မီးဖုတ်ထားသောပုံလေးပါ မကြာခဏမေးလာသူများအတွက်ရော မမေးပေမဲ့ ရာသီချောင်းဆိုးဝေဒနာခံစားနေရသူများ အတွက်ပါတင်ပြအပ်ပါသည်ရောဂါကပ်ဘေးကြီးမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ … Read more
August 8, 2021 by Latest Myanmar News
ချွဲအရမ်း ကျပ်​နေလျှင် ချောင်းကို အဆိုပဲဖြစ်ဖြစ် အ​ခြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုး​နေရင် ဟင်း​​သောက်ပန်းကန်တလုံးထဲကို ပဲပင်​ပေါက် လက်တစ်ဆုပ်ထည့် ရေ​နွေးဆူဆူကို​လောင်းထည့် ပန်းကန်ပြားတချပ်နဲ့ အုပ်ထားထားပါ ​ ​သောက်လို့ရတဲ့ အပူပမာဏ ​ရောက်ရင် တကျိုက်ကျိုက်နဲ့ ​သောက်ချပေးလိုက်ပါ ပဲပင်​ပေါက်က​တော့ ကြိုက်ရင်စား မကြိုက်ရင်လွှင့်ပြစ်ပါ ချက်ခြင်းချွဲကျ​စေပြီး ​ချောင်းဆိုးတာရပ်သွားပါလိမ့်မယ် ကိုယ်​တွေ့ပါခင်ဗျာ ကျန်းမာ​ရေး မှတ်စု ကံတလူ Zawgyi ခၽြဲအရမ္း က်ပ္​ေနလွ်င္ ေခ်ာင္းကို အဆိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အ​ေျခာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆိုး​ေနရင္ ဟင္း​​ေသာက္ပန္းကန္တလုံးထဲကို ပဲပင္​ေပါက္ လက္တစ္ဆုပ္ထည့္ ေရ​ေႏြးဆူဆူကို​ေလာင္းထည့္ ပန္းကန္ျပားတခ်ပ္နဲ႔ အုပ္ထားထားပါ ​ ​ေသာက္လို႔ရတဲ့ အပူပမာဏ ​ေရာက္ရင္ တက်ိဳက္က်ိဳက္နဲ႔ ​ေသာက္ခ်ေပးလိုက္ပါ ပဲပင္​ေပါက္က​ေတာ့ ႀကိဳက္ရင္စား မႀကိဳက္ရင္လႊင့္ျပစ္ပါ ခ်က္ျခင္းခၽြဲက်​ေစၿပီး ​ေခ်ာင္းဆိုးတာရပ္သြားပါလိမ့္မယ္ ကိုယ္​ေတြ႕ပါခင္ဗ်ာ က်န္းမာ​ေရး မွတ္စု ကံတလူ
လူသိနည်းသည့် ရှမ်းနံနံ၏ စွမ်းရည်
ရှမ်းနံနံသာ ပြောရတယ်၊ ရှမ်းတွေပဲစားကြတဲ့ ဟင်းခတ် မဟုတ်ပါဘူး။ မွန်ဟင်းတွေမှာလည်းပါတယ်၊ ရခိုင်ဟင်းတွေမှာလည်းပါကြပါတယ်၊ မြန်မာဟင်းတွေမှာလည်းပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားက နေရာဒေသအမျိုးမျိုးရဲ့ ဒေသအစားအစာတွေမှာ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် အသုံးများတယ်ဆိုပေမယ့် ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်မှာ စားခဲ့ရတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးမှာ ရှမ်းနံနံတွေ နိုင်းချင်းထည့်စားကြတာ တွေ့ဖူးတယ်။ ရှမ်းနံနံက အစိမ်းပဲစားစား၊ ဟင်းထဲပဲ ခတ်ခတ် အညှီပျောက်တယ်၊ ဟင်းအနံ့ကို ပိုမွှေးစေတယ်လေ။ အစကတော့ မြန်မာမှာပဲ သုံးကြတယ်ထင်နေတာ။ သူ့နာမည်က ရှမ်းနံနံဆိုတာကိုး။ ဒါပေမယ့် သူ့အကြောင်းရှာကြည့်လိုက်တော့မှ မက္ကဆီကိုနဲ့ တောင်အမေရိကမှာရော၊ ကာရေးဘီးယား၊ လက်တင်အမေရိကတို့မှာပါ အသုံးများတာသိလိုက်ရတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်လို့ ဆေးတွေတောင် ထုတ်တာနော်။ သွေးတိုးကျတယ်၊ အစာကြေတယ်၊ စတဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှမှာဆို မြန်မာအပြင် အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ထိုင်းမှာလည်း စားသုံးကြပါတယ်။ ထိုင်းဟင်းလျာတွေမှာဆို နံနံပင်အမြစ်၊ ရှမ်းနံနံအမြစ်တွေထောင်းထည့်တော့ မွှေးနေရော။ … Read more
August 6, 2021 by Latest Myanmar News
အရသာပျောက်နေသူများအတွက် ကိုယ်တွေ့နည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် အရသာ ပျောက်နေသူများ ကိုယ်တွေ့လေးမျှဝေ ချင်လို့ပါရှင့်။ အိမ်က မောင်လေးက အရသာကော အနံ့ကော ပျောက်နေတာ ၃ရက်ရှိပါပြီ။ မနေ့ညက စ အရသာ ပြန်ရလာပါပြီ။ ဘာတွေ လုပ်လဲ ဆိုတော့ – ချွေးထွက်အောင်( ဆနွင်းမိုင်း) ရှူပါတယ်။မီးနေသည်တွေ မီးတွင်းထဲမှာ လုပ်ရသလိုပါ တစ်အိမ်သားလုံး လုပ်ပါတယ်တယ်ရှင့် ဆနွင်းမိုင်းကတော့ ချွေးပုတ်ချွေးစက်တွေ အကုန်စင်အောင်ထွက်ပြီး လေသမားတွေ အတွက်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ မောင်လေး က အရင်နေ့တွေက တော့ သိပ်မထူးခြားပါဘူး ၂ရက်ဖျားပြီးမှ အနံပျောက်တာပါ။ဘယ်ဆေးခန်းမှ မပြပါဘူး အိမ်မာဘဲ တစ်အိမ်လုံး stay home နေပါတယ် ကိုဗစ်စ ဆိုးပြီ ဆိုကတည်းက ကြက်ဥပြုတ် တစ်ယောက် ၂ လုံးစီ နေ့တိုင်းပြုတ်စားပါတယ်။ ကြက်ပေါင်း … Read more